टिप्पणी बुधबार, चैत ५, २०७६
अनुसन्धानहरूले रक्सी र सूर्ती भन्दा गाँजा कम हानिकारक र कम अम्मलकारी रहेको प्रमाणित गरेको छ। हामीकहाँ रक्सी र सूर्ती खुला छ तर गाँजा भने प्रतिबन्धित।
नेपाली समाजमा गाँजाको सकारात्मक पक्ष बारेको सचेतना अत्यन्त न्यून छ । गाँजा हतियार जस्तै हो, यसको सदुपयोगले रक्षा गर्दछ भने दुरुपयोगले घाइते बनाउँछ । गाँजा प्रतिबन्धलाई खुला गर्दा नियमन भने सम्यक् रूपले गर्नु अनिवार्य हुनेछ।
नेपालमा कुनै वेला परम्परागत रूपमै गाँजाबाट बनाइएको आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग हुन्थ्यो । ‘विजया’ भनिने गाँजाबाट निर्मित औषधि शीघ्र स्खलन, नवप्रसूतालाई पुनर्स्थापना, अनिद्रा, नाकबाट पानी बग्ने, झाडापखाला, अत्यधिक पीडा, मानसिक रोग जस्ता समस्यामा प्रयोग हुने गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाको अभिलेखमा पाइन्छ ।
बिरामी लठ्याउन वा पीडा कम गर्न ‘एनेस्थेसिक’ वा ‘एनाल्जेसिक’ औषधि नभएको त्यो वेला गाँजाकै प्रयोग गरिन्थ्यो तर पछि गाँजा प्रतिबन्धित भएसँगै वैद्यखानाले पनि यस्ता औषधि उत्पादन गर्न छाड्यो।
नेपालमा उत्पादित गाँजा विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । नेपाली समाजमा बहुगुणी गाँजा विभिन्न स्वरुपमा प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । यौन जीवनको सुधारका लागि अब बिस्कुट, कुकिज, क्यान्डी, अचार, चिया, जुस आदिमा पनि गाँजा मिसाएर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।
गाँजाको तेल बनाएर अन्य तेल, क्रिमसँग मिसाई शरीर मसाज गर्न पनि सकिन्छ । युवा पुस्ताले अधिक मात्रामा सेवन गर्ने बियर एवं रक्सीमा समेत गाँजाको प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ।
आचार्य प्रियव्रत शर्मा लिखित पुस्तक ‘द्रव्यगुण विज्ञान’ मा औषधीय प्रभाव पाउन एक व्यक्तिले भाङ १२५ देखि २५० मि.ग्रा., गाँजा ६० देखि १२५ मि.ग्रा. र चरेस ३० मि.ग्रा. प्रतिदिन सेवन गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसभन्दा बढी मात्रा प्रयोग गर्दा त्यो दुरुपयोग वा दुर्व्यसन हुन्छ । गाँजाको हानिकारक वा विषालु प्रभावले आँखा र मस्तिष्कलाई प्रत्यक्ष रूपमा क्षति पुर्‍याउँछ ।
‘द्रव्यगुण विज्ञान’ मा औषधीय वनस्पतिहरूको मदकारी समूह अन्तर्गत भङ्गा शीर्षकमा गाँजा बारे चर्चा गरिएको छ । जहाँ स्पष्ट रूपमा गाँजाले शुक्रको स्तम्भन गर्दछ र गर्भाशयलाई तीव्र रूपमा सङ्कुचित बनाउँछ भनिएको छ । शुक्र स्तम्भन भनेको सहवासका वेला शीघ्र स्खलन रोक्नु हो ।
गाँजाले सहवास काललाई लम्ब्याउँछ । यसरी यौन क्रीडामा संलग्नहरू पूर्ण रूपमा आनन्दित र सन्तुष्ट बन्न सक्छन् । फलतः शुक्र सन्तुलित संख्यामा निस्कन्छ । नपुंसकता हटाउँछ । त्यस सबल प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुने शुक्र गुणवान र शक्तिशाली हुन्छ, जसले सुयोग्य सन्तान उत्पादन गर्न सम्भव बनाउँछ।
शुक्रको स्तम्भन र गर्भाशयको तीव्र सङ्कुचनले क्रीडाका बेला यौनसाथीहरूको मस्तिष्कमा ‘डोपामाइन इफेक्ट’ ल्याउँछ । जसबाट सहवासीहरू भावनात्मक रूपमा घनिष्ठ बन्छन् । मनमा शान्ति मिल्छ । फलतः हिंसात्मक मनोवृत्ति आउन पाउँदैन।
हिजोआज भने गाँजाको दुर्व्यसनले धेरैको जीवन बर्बाद बनाएको मात्र सुन्न पाइन्छ । फलतः यसमा व्यापक औषधीय गुणहरू हुँदाहुँदै पनि यसलाई नशालु पदार्थ वा लागूपदार्थको रूपमा मात्र बुझिएको छ । यो बुझाइ नेपाली परम्परा, संस्कृति, सामाजिक मान्यता र आयुर्वेदिक विश्वास विरुद्ध पनि हो।
यौन सम्पर्कभन्दा अगाडि मारिजुआना अर्थात् गाँजा सेवन गर्ने महिलाले गाँजाको प्रयोग नगर्ने महिलाको तुलनामा दुई गुणा अर्गाजम (चरम यौनसन्तुष्टि) प्राप्त गरेको बताएको भन्दै बेलायतको रिसर्चगेट नामक सेक्सुअल मेडिसिन जर्नलले ‘द रिलेसनसिप बिटविन मरियुआना युज प्रिओर टु सेक्स एण्ड सेक्सुअल फङ्सन इन विमेन’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो।
अमेरिकाको सेन्ट लुइसस्थित एकेडेमिक सेन्टरको एब्स्टेट्रिक्स र गाइनोकोलोजी विभागमा ३७३ महिलामा यो सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा १२७ जना अर्थात् ३४ प्रतिशत महिलाले यौन सम्पर्क शुरू गर्नुभन्दा अगाडि गाँजा सेवन गरेका थिए।
अध्ययनमा विशेषतः महिलाको यौनजीवनमा सन्तुष्टि, यौन उत्तेजना, चरमोत्कर्ष, तरलता, यौन सम्पर्कको वेला हुने पीडा आदिसँग गाँजाको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भनी खोजी गर्ने कोशिश गरिएको थियो।
फागु पूर्णिमा\_होली र शिवरात्रिमा गाँजालाई घोट्टा (दूधको परिकार) वा मिठाईमा राखेर खाने खुवाउने चलन हिजोआज पनि व्यापक रूपमा छ । अथर्ववेदमा गाँजालाई पाँच पूज्य वनस्पतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जसले मानवको दुष्कर्मलाई काट्न सक्ने गुण बोकेको हुन्छ।
विहीबार, साउन २९, २०७७ एक साताभित्रै कोराेनाबाट ३५ जनाको मृत्यु, आधा बढीमा थिएन दीर्घ रोग